China OEM Slip Grip Yoga Trampoline Socks လက်ကားစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Sungnan
OEM Anti-Slip Grip Yoga Trampoline Socks လက်ကားအရောင်းဆိုင်
Sungnan သည်အမျိုးမျိုးသော trampoline park grip socks များကိုလက္ခံပေးသည်။ ကြိုဆိုပါတယ်
ပုံစံနံပါတ် - SN-S1101
အရောင်:6အရောင်များသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ပစ္စည်း Polyester / လဲမှို့
အရွယ်အစား: 10CM / 12CM / 14CM / 16CM / 18CM / 20CM / 22CM / 24CM / 26CM
ရာသီ နွေ ဦး / နွေရာသီ / ဆောင်း ဦး / ဆောင်းရာသီ
လိင်: အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
MOQ: 1200pcs / ဒီဇိုင်း / အရွယ်အစား
လျှောက်ထား: မြှင့်တင်ရေး Socks & Trampoline ပန်းခြံ
ထုတ်ကုန်အမည် OEM Anti-Slip Grip Yoga Trampoline Socks လက်ကားအရောင်းဆိုင်
အရောင်6အရောင်များသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
အရွယ်အစား 10CM / 12CM / 14CM / 16CM / 18CM / 20CM / 22CM / 24CM / 26CM
MOQ 1200pcs / ဒီဇိုင်း / အရွယ်အစား
အသုံးပြုမှု Trampoline ပန်းခြံ
စက်ရုံအားတိုက်ရိုက်၊ ၁၀ နှစ်အတွက်ခြေအိတ်များအထူးပြု။
ကျွန်တော်တို့ကို Logo ပို့ပါ၊ ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်. ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဇိုင်းပို့ပါ, ကျနော်တို့အခမဲ့နမူနာစေနိုင်သည်.
Sungnan trampoline ခြေအိတ်trampoline ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်အတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသောပန်းခြံတစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသော့ချက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းသို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဆင့်တစ်ခုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးသည်။
Skid ဒီဇိုင်း - အလွန်သေးငယ်သောချစ်စရာကောင်းသောရော်ဘာအစက်များသည်အောက်ခြေရှိမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပေးသည်။ မစလစ်ဒီဇိုင်းသည်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုအထူးသဖြင့်ကြမ်းခင်းချောချောမွေ့မွေ့ထိစေသည်။
Multiple Application: ယောဂခြေအိတ်များ၊ စည်သွတ်ဖိနပ်များ၊ ပိလတ်စ်အိတ်များ၊ ဘဲလေးအပေါက်များအကန့်များ၊ ကခုန်ခြေအိတ်များ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်ခြေအိတ်များ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ကခုန်ခြေအိတ်များ၊ ယောဂဖိနပ်များ၊ အားကစားခြေအိတ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ချောမဟုတ်သောခြေအိတ်။
အားလုံးရာသီအတွက်စုံလင်သော wear: ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အဝတ်လျှော်စက်အား၎င်းသည်ချုံ့ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းများကိုအကြိမ်ကြိမ်အာမခံပါသည်။ ယောဂ၊ ပိလတ်မင်း၊ ဘဲလေး၊ အက၊ အက၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ကိုယ်ခံပညာ၊ Taekwondo, Trampoline, လက်ဝှေ့၊ ဆေးရုံ၊
အရည်အသွေးအရေးကြီးပါသည်ဖြေ - အကယ်၍ မင်းတို့ဟာငါတို့ရဲ့ခြေအိတ်တွေနဲ့ပြproblemsနာတစ်ခုခုရှိရင်၊ ငါတို့ကိုအသိပေးပါ။ သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုသင်နှစ်သက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
အဆင်ပြေဝတ်ဆင်: Sungnan ၏ခြေအိတ်များကို ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းသည်သင့်အားကောင်းမွန်သောဟန်ချက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ဒဏ်ရာကာကွယ်ခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုနှင့် proprioception တို့ကိုခွင့်ပြုခြင်းတို့တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ စက်ကိုရေအေး (သို့) ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် / ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်ရှိနူးညံ့သောဆပ်ပြာဖြင့်စက်လျှော်ပါ။
အ ၀ တ်လျှော်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်း - စက်လျှော်စက်နှင့်လက်ဆေးခြင်း / သံမဏိမပြုလုပ်ရ၊
ရှေ့သို့ စိတ်ကြိုက်သဲသောင်ပြင်အိတ်ပုံနှိပ်ခြင်း Drawstring ကျောပိုးအိတ် Sackpack
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံစျေးပေါသောကလေးများချည်အတွင်းပိုင်းချည်မျှင်ခလုတ် Trampoline ချုပ်ကိုင်ခြေအိတ်
စိတ်ကြိုက် trampoline ခြေအိတ်